Ramadaan Axkaam &Eedaab (Hussein Jama Guudcade)
Sunday May 12, 2019 - 09:01:29 in Maqaallo by Wariye Tiriko
3: Waa maxay Xukunkiisu Qofka ka taga Ramadaanta ?
Culumada islaamku waxay isku raaceen qofku hadii uu dafiro inay Ramadaan waajib tahay oo ka badheedhaa inaanu diinta haysan.
Cabdilaahi bin cabas Rc wuxuu yidhi: shanta rukni ee islaamka qofka dafira mid ka mida ama wadda dafiraa waa qof gaal ah.
4: Xikmada Ramadaan loo waajibiyey waa maxay?
Ramadaan waxaa la inoogu waajibiyey xikmado badan waxaana ka mid ah:
vIyadoo xididada jidhka bin aadamka lagu cidhiidhinayo shaydaanka oo dhex mara , halkaas oo uu ka dareemo cadaadis qofkana uu ka durkayo shaydaanku, maadaama cidhiidhi la geliyey meelihii uu dhex socday.
vNafta ayay soontu daahirisaa oo ka ilaalisaa akhlaaqda xun.
vAduunyada ayay qofka ka Zaahidisaa aakhirona way jeclaysiisaa.
vWaxaynu dareemaynaa xanuunka ay leedahay gaajadu waxaanayna u naxariisanaynaa kuwa masaakiinta ah.
vNafta ayaa ka caado dhiganaysa Daacad iyo Alle jacayl.
vCaafimaadkii jidhka ayaa kordhaya oo dareemayana fudayd.
vRamadaan waxay dawaysaa xanuuno badan oo bin aadamka ku dhaca.
vRamadaan waa bil la dareemayo isku naxariisasho iyo farxad.
vXanuunada caloosha ku dhaca ayay dawaysaa Soomtu.
vSonkorta , wadne xanuunka iyo dhiigkarka way dhintaa.
Waxaa yaab leh qof muslima oo intuu cuntadii cabitaankii iyo xaaskiisiiba iska daayey hadana aan dayn wixii Illaah ka xaaraantimeeyey taasi waxay meel kaga dhacaysaa sifaadka iyo xikmada ramadaan ee aan kor ku xusnay, wuxuuna yahay qofkaasi qof iska daayey keliya cabitaankii iyo cunitaankii wax kalese aan korodhsan.
5: Aadaabta guud ee Soomta.
Cibaado kastaa waxay leedahay aadaab & axkaam soontuna waa la mid oo iyaduna waxay leedahay axkaam iyo aadaab, hadaba aadaabta soonta waxaa ka mid ah:
vWaa in aanu qofku dagaalamin
vWaa inaanu jaahilnimo samayn.
vWaa inaanu caytamin
vWaa inaanu laqwi ku hadal,
Sidaas waxaa inoo cadeeyey xabiibkeena Scw wuxuu yidh: soontu waa gaashaan, hadii qofkiin sooman yahay waa inaanu jaahilnimo samayn , waa inaanu caytamin, hadii qof la dagaalamo ama caayo ha yidhaaho waan soomanahay, waan soomanahay ha ku celceliyo kelmadaas, hadaba hadaan mid mid u eegno:
Waa inaan qofku dagaalamin , kolayba Bin aadam ayaynu nahay hadii qofku uu la kulmo dagaal iyo rabshad waa inuu is kaantaroolo is xakameeyo oo qofkii la dagaalay ku yidhaaho waan soomahay,
Sidaas oo kale hadii qof caayo ama aflagaadeeyo ama karooxo ama ku dhega hadlo waa inuu yidhaahaa waan soomanahay waan soomanahay,
Hadii jaahilnimo loola yimaado maaha qofka soomani qof jaahilnimo sameeya waa inuu ka gaabsadaa aanuna ka jawaabin.
Soontu waa gaashaan sida gaashaanku qofka uga difaaco nabarka ayuu soontuna xumaanta uga ilaaliyaa, gaashaanka maanta waxaa halkiisii ku jira Jaakada aan xabadu Karin, haduu qofku soomanyahay ma karayo hadalka xumi oo dagaalku ma karayo oo wuu iska daalayaa qofka xumaanta u gaysanaya qofka sooman.
Hadaba soonta qofka sooman Sida uu Rasuulkeenu xadiiskaas laftiisa inoogu sheegay kabbaca ama urta ka soo baxaysa afkiisa Illaahay agtiisa waxay ka udgoon badan tahay Miskiga cadarka la yidhaaho ama shayga la yidhaaho miski. Xataa maalinta qiyaame urta afka qofkii soomi jiray ka soo baxdaa waa sida miskiga ah oo kale, waxaa kaloo la soo weriyey marka ehelul Jannada la geliyo Jannada waxay dareemaan ur udgoon markaasay yidhaahaan waa maxay urtaasi udgooni? Waxaa loogu jawaabaa waa naqaska ka soo baxa dadkii soomi jiray afkooda.
Illaahayna wuxuu yidhaahaa SWT: cuntada iyo cabitaanka dartay buu uga tegay qofka soomani anigaa abaal marin doona wanaaga maalinta uu soomo lagu abaal marinayaana waa toban laab.
Soontu waa gaashaan waxay qofka ka difaacdaa xumaanta waxay ka difaacdaa Naarta waxay ka difaacdaa shahwaadka , waxay ka difaacdaa laqwiga waxay ka difaacdaa qaflada waxay ka difaacdaa xumaanta dhamaanteed.